Waxaan inta badan door bidaan kala duwanaansho badan oo nolosheena in ay ka gudbaan dabeecadaha nooga waran. Sidaas, waxaan baadi badan mawduucyada, midabada, qalabka, wallpapers, harag ah hindisooyinkayaga OS, barnaamijyadooda, iyo multimedia ugu isticmaalo. Halkan, waxaan doonayaa in aan ku tuso sida aad si fudud u beddeli karaan maqaarka si aad u jecel oo warbaahinta ugu isticmaalay Apps VLC iyo halka aad ku heli kartaa. Maqaalkani waxa laga yaabaa in aad gacan ka geysato ay ku daray qaar ka mid ah midabo kala badan oo iminka u muuqata inay aad u dhadhan.
Talaabada 1: Hel ah maqaarka Custom VLC ka Internet
Waxaad ka heli kartaa website-ka haystaa sacab muggiis meesha aad kala soo bixi kartaa, qarbeddaduna waa caadadii. Waxaa jira dad badan oo halkaas kuwaas oo la isticmaalayo ayaa qarbeddada kala VLC. oo aad kala socon kartaa hoos ku qoran talooyin u soo degsado dheeraad ah adhidibadeed hargahood oo VLC. Si kastaba ha ahaatee, waxaad si fudud halkan ka heli kartaa oo kale qarbeddada ayaa si rasmi ah VLC sidii loo baray halkan . Hargahood oo VLC aan diyaar u ah Mac OS.
Talaabada 2: Download maqaarka ah in aad PC
Hadda waxaad doorbiday caadadii maqaarka VLC website-ka kor ku soo bixi kartaa oo u badbaadin doonaa in aad Computer ee doorashada. Si aad u hesho ballanqaad ah dhamaystiran nadiif ah oo si fiican loo badbaadiyo VLC files maqaarka, fadlan kala soo bixi ka VLC website-ka kor ku xusan.
Waxaad ka heli kartaa file ah meel aad ku badbaadi in your computer, oo waxay noqon doontaa in (.vlt) file kordhin. Haddaba nidaamyada hoos ku hoggaamin doonaa, maqaarka inay wax ka bedesho si aad ciyaaryahan VLC.
Talaabada 3: Helitaanka Bar Menu ee VLC Player
Fur VLC ka Player iyo qaybta sare ee daaqadda, waxaad ka heli kartaa bar menu u VLC Player ah. Bar menu Tani soo baxay ayaa kaa caawin doona in la beddelo qarbeddaduna by tallaabooyinka hoos ku qoran.
Talaabada 4: Tag "rabtid" ka "Tools" Menu Bar
Laga soo bilaabo bar menu ee VLC Player ah, dooro "Tools" menu, oo waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah toggle menu ee lagu dooranayo. Halkan, waa inaad tagtaa si hoose menu "rabtid" oo aad keeni doontaa in maqaarka menu. Menu Tani waa menu goobaha loogu Player VLC.
Hadda riix in ay "aad rabtid" menu si aad u hesho daaqadaha sida hoos ku qoran mid ka mid ah. The "interface Settings" ayaa mas'uul ka ah doorashada maqaarka caado ama default ah.
Raadi ee "Fiiri iyo Dareen" doorasho ka "Settings interface" ka dibna waxa aad ka heli kartaa doorasho la door maqaarka. Si aad u bedesho maqaarka caado, aad u baahan tahay si aad u hubiso "Isticmaalka Custom maqaarka".
Isticmaal style hooyo - Waxay kuu ogolaaneysaa in aad sii maqaarka default u VLC Player ah.
Isticmaal Custom maqaarka - Waxay kuu ogolaaneysaa in aad xulan caado ama maqaarka soo bixi, waayo, aad VLC Player.
Talaabada 5: ka VLC fur maqaarka ka soo bixi Player
Hadda Waxaad si fudud ku dari kartaa maqaarka ayaa ah in aad soo bixi hore oo badbaadiyey on your computer. Guji "Browse" sanduuq oo arbushin doonaa suuqa kala kombiyuutarka si aad u hesho file aad rabto in aad ku darto. Hel file ee your computer iyo dooro file-ka (.vlt) file kordhin. Hadda Riix "Open" sanduuqa hoose ee suuqa kala file in ay u doortaan haragga ku darto.
Ka dib markii ay ku daray faylka si aad caadadii file il maqaarka, waxaad badbaadin kartaa file maqaarka si loo helo file maqaarka ku beddeleen VLC Player ah. Tani waa tallaabada ugu dambeysa isbedelka maqaarka aad Player VLC.
Talaabada 6: Guuleysatey VLC Player / Play Video ah oo la VLC Player
Marka waqtiga soo socda aad furi doonaa VLC ka Player ama ciyaaro file warbaahinta iyada oo VLC Player, waxaad heli kartaa maqaarka ee VLC ka Player. Sidaas, raaxaystaan ​​caadadii VLC kale qarbeddada ayaa on your computer. Links Qaar ka mid ah hoos ayaa lagu siiyo si ay u helaan more VLC haragoodu. Raac tilmaamaha ku xusan iyo ciyaaro files warbaahinta jecel aad ka jeeclaadeen maqaarka VLC.
Download More haragoodu VLC
Waxaa jira qaar ka mid ah websites meesha aad kala soo bixi kartaa adiga oo la doorbidaa VLC haragoodu. Waxaad si fudud u hubiso kartaa website-ka VLC inaad kala soo baxdo ayaa qarbeddada kala duwan ee aad VLC in Windows iyo Linux PC. Links Qaar ka mid ah hoos ayaa la siiyaa si ay u soo bixi more VLC haragoodu.
Sida loo Beddelaan VLC Files in MP3
Xalka on MP4 Video ciyaareynin on VLC Player
Sida loo isticmaalo VLC u PS3?
Isticmaal VLC for Windows 8 habsami leh!
Sida loo Play ISO faylka kala ah VLC Media Player?
Top VLC MKV Radidiyaha Arrimaha
Degsado nooca ugu dambeeya ee VLC
Sida loo Play iyo Beddelaan MTS Faylal ay la VLC
> Resource > VLC > Sida loo beddel VLC Maqaarka